Akuku eyịm | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Akuku eyịm
Ọ bụghị naanị na-esi ísì ụtọ, kama ọ bara uru: ihe ngwọta nke basil
N'ọtụtụ mba, basil na-ejikọta ihe dị egwu, na-ewere ya dị ka ihe atụ nke ọdịmma n'ime ụlọ. Ọ dịghị ihe dị iche na nke a, n'ihi na osisi ahụ nwere ike igbu germs ma mee ka ikuku dị ọcha. Kedu ihe iji basil, ihe mejupụtara nke osisi ahụ? Akwụkwọ ya nwere tannins na mineral, mmanụ ndị dị mkpa, lepidine, propsoline, saponins na glycosides.
Otu esi akụ osisi eyị oyi
Gịnị mere ha ji akụ osisi eyị oyi? Dị ka ọ dị, maka owuwe ihe ubi ngwa ngwa, dị ka ọkara nke ọkara nke May, owuwe ihe ubi ahụ nwere ike wewe ihe ubi, ebe ụgbụ akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ mepụtara afọ abụọ ma ọ bụ karịa ka e mesịrị. Ọzọkwa, yabasị, na-ekpo ọkụ na ala, ma ọ bụghị na ọ na-esi na mbụ apụta, na-eguzogide ọgwụ na ọrịa, na-adighi adọrọ mmasị na pests.
Atụmatụ kachasị maka nlekọta na akuku nke shallots
Eyịm - osisi dị oké mkpa na ụlọ agha nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nnabata niile. Ọ na-enye efere efere ma na-eme ka uto ha dịkwuo ụtọ, ísì ahụ mara mma na-enyekwa ihe oriri na-esi ísì ụtọ na-esi ísì ụtọ. Ọtụtụ mgbe na kichin anyị nwere ike ịchọta eyịm, ma e nwere ndị ọzọ, ọ bụghị obere ihe dị iche.
Ịgha mkpụrụ ma na-eto eto eyịm na ụzọ ndị China
Na-eto eto eyịm na ụzọ ndị China bụ nhọrọ magburu onwe ya iji nweta ọganihu dị mma nke eyịm, nke nwere àgwà dị oke mma ma echekwa ya ruo ogologo oge. Site n'inwe ihe dị otú ahụ, e nwetara nnukwu eyịm, nke na-egbuke egbuke, nke dị ụtọ. Otu ihe dị iche iche nke owuwe ihe ubi nke a na-enweta n'ụzọ dị otú a bụ na isi yabasị nwere ụdị ọdịdị dịtụ.
Anyị na-eto eto yabasị na ubi anyị: atụmatụ nke ịkụ na nlekọta
Ọnụnọ nke eyịm enweghị ike ịme ọnụ ọgụgụ dị ukwuu na efere, ebe ọ bụ na osisi a na-eme ka uto ngwaahịa ahụ dị ụtọ ma na-enye ha nkọ. Однако видовое разнообразие этой культуры не ограничивается лишь известным всем луком-пореем, и неплохим альтернативным вариантом является лук-батун, описание которого представлено ниже.
Gini ka esi tinye ya na ogwu tutu o kpoo, nhazi ogwu na potassium permanganate na nnu
N'ileghachi anya na mbụ, usoro nke na-eto eto eyịm adịghị ike ma ghara inwe nsogbu ọ bụla, mana nke a abụghị ikpe, ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-elekọta ubi na-eche ọtụtụ nsogbu nwere ike idozi nanị site n'ịgbaso ndụmọdụ ndị ọkachamara nwere ahụmahụ. N'etiti nsogbu ndị isi, enwere nnukwu akụ nke osisi ahụ, nke na-ebelata ohere ịnweta nnukwu nnukwu isi ya.
Esi esi eto slizun yabasị: iwu nke ịkụ ihe ma lekọta
N'ọtụtụ ntụziaka nke nri hụrụ eyịm. Na okike, e nwere ọtụtụ n'ime ụdị ya, ụfọdụ n'ime ha na-eri nri. Site n'isiokwu a, ị ga-amụta ihe ụta slug, agrotechnology nke akuku na ụdị nlekọta dị mkpa. Ị ma? Onion slizun karịrị ihe ndị ọzọ niile eyịm na ọdịnaya nke trace ọcha. Kedu ihe bụ slizun yabasị A slizun bụ ahịhịa nke perennial nke sitere na mkpụrụ osisi Onion, ezinụlọ Onion.
Ụkpụrụ nke kụrụ eyịm na isi na mmiri
Na mmiri nke eyịm nwere ike kụrụ ọ bụghị naanị na nku, kamakwa isi. N'aka nke aka, o yiri ka odighi usoro di mfe: igbanye obere isi n'ime ala, ma site na ntida ihe ubi ihe ubi. N'ezie, iji nweta ihe a tụrụ anya ya, ọ dị mkpa ka ị mara ụfọdụ atụmatụ nke na-eto eto nri n'otu ụzọ ahụ.
Ọbụna onye mbido nwere ike ijide ya! Nzọụkwụ site nzọụkwụ nkọwa na kacha mma ntụziaka maka marinade maka kabeeji
Olee otú ịzụlite a ọgwụgwọ maka Apoca Colorado nduku ebe?
Nlekọta na akuku nke osisi apụl: isi iwu
Esi mee ka ị ṅụọ iko maka ọbọgwụ mee ya n'onwe gị
Apricot "nwa ojii": kụrụ ma lekọta ubi
Geranium na-asọ oyi: ọ ga-ekwe omume ịghaghachi na otu esi elekọta osisi ahụ mgbe usoro ahụ gasịrị?
Kedu ka esi eto cryptomeria n'ụlọ: ịkụ ihe ma na-elekọta cedar na ụlọ
Uru na ọghọm nke onye ọrụ ntuziaka na dacha